Dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo Abaabulo Dagaal oo laga dareemayo G.Galgaduud – SBC
Dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo Abaabulo Dagaal oo laga dareemayo G.Galgaduud
Dhuusamareeb:- Dhaq dhaqaaqyadan ayaa ka kala soconaya degmooyinka Ceel buur oo ay gacanta ku hayaan xarakada Alshabaab iyo magaalada Dhuusamareeb oo ah xarunta gobolka Galgaduud islamarkaana ay gacanta ku hayaan culimaaudiinka Ahlsuna Waljameeca .
Dhaq dhaqaaqa ay ka wadaan degmada Ceelbuur iyo deegaanada ku heeran xarakada Alshabaab ayaan la garan karin halka ay uga wajihi doonaan iyadoo iminka aysan jirin wax faah faahin ah oo lagu sheegayo ujeedada dhaq dhaqaaqa halkaasi ka wada ee Xarakada Alshabaab.
Sidoo kale Degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ee ay gacanta ku hayaan Culimaaudiinka Ahlusuna Waljameeca ayaa iyo hareeraheeda ayaa la mid ah Deg Ceel buur, waxaana lagu arki karaa ciidamada Ahlusuna oo iyagu ku gaashaaman Hubka iyo gaadiidka dagaalka oo halkaasi ka muujinaya Dhaq dhaqaaqyo u muuqda u diyaar garow dagaal.
Sidoo kale ma jiraan wax faah faahin ah oo ay dhankooda Ahlusuna waljameeca ka bixiyeen dhaq dhaqaaqyadan ciidan ee ay wadaan, balse mar aynu la xiriirnay gudoomiyaha ahlusuna waljameeca Macalin Maxamuud Macalin Xasan ayaa ka gaabsaday wararkan ah dhaq dhaqaaqa ciidan isagoona sheegay in aysan ciidankoodu wadin wax dhaq dhaqaaq ah.
sikastaba ha ahaatee waxaa siweyn loogaga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada ku heeran dhaq dhaqaaq ay wadaan ciidamada Ahlusuna waljameeca, waxaana arintan ay ku soo aadeysaa xili dhowaan dagaalo ay ku dhexmareen gudaha Dhuusamareeb ciidamo ka tirsan xarkada Alshabaab iyo Kuwa Ahlusuna waljameeca .
SBC International- Dhuusamareeb.